Ka Fogoow In Hay'aduhu Ku Haystaan ​​Afduub | Martech Zone
Ka Fogoow In Hay'aduhu Ku Haystaan ​​Afduub
Jimco, Febraayo 5, 2016 Jimco, Febraayo 5, 2016 Douglas Karr
Lahaanshaha hay'addeydu waxay indhaha u furtay sida ganacsiga loo sameeyo… mana qurux badna. Ma doonayo in qoraalkani noqdo wakaalad gunta wixii ka xumaada maaddaama aan u damqanayo hay'ado badan iyo go'aannada adag ee ay tahay inay gaaraan. Markii ugu horeysay ee aan bilaabay, waxaan ahaa mid kufiican oo aanan rabin inaan noqdo in wakaaladda - mid ka mid ah wakaaladaha nickeeyay oo nusqaameeyay macaamiisha, ku riixday inay iyaga maalin walba ka sii darto, kabadiso oo beddesho, ama ku dallacdo wax badan oo haye ah markii ay kor u kacaan.
Waxaan la galnay qandaraas aad u dabacsan oo macaamiisha u suurta geliyay inay ka baxaan markay doonayeen, laakiin anagana annaga ayay nagu noqotay - marar badan. Halkii loogu isticmaali lahaa banaanka markii arimuhu shaqeynaynin, waxaan haysanay macaamiil dhowr ah oo iska diiwaangeliyey nidaamkeena sicirka sicirka, si xoog leh u riix si aan u helno tiro ka badan shaqadii aan balan qaadnay, ka dibna ka tagno si aan uga fogaano bixinta wadada. Taasi waxay nagu qaadatay waqti iyo lacag badan.
Taasi waxay tiri, wali waan necbahay inaan helno emayl sidan oo kale ah:
Tani waxay keentaa laba dhibaato oo waaweyn. Marka hore, macmiilku hadda lacag la’aan buu ku tiirsan yahay wuxuuna ku tiirsan yahay hay’adda ay ku kharash gareeyeen miisaaniyadooda. Ta labaad, macmiilku hadda wuu ka xanaaqsan yahay hay'adda, fursadaha ay wax ku leexanayaanna ma fiicna. Taasi waxay ka dhigan tahay inay u baahan karaan inay ka fogaadaan oo ay dib u bilaabaan. Nidaam qaali ah oo ay awoodi waayaan inay awoodaan.
Waxay kuxirantahay qandaraaska hay'ada, wakaaladda sidoo kale waxay ku jiri kartaa midig. Waxaa laga yaabaa in wakaaladdu ay dadaal badan ku bixisay joogitaanka websaydhka oo ay ka shaqeyneyso qandaraas halkaas oo macmiilku uu ku bixinayo qorshe qayb. Boggu wuxuu qaadan karaa xoogaa in sifiican loo qiimeeyo (in kastoo aan layaabay la taliye SEO ah ayaa qaadan doona macaamiisha tartamaya). Ma noqon karto xaalad afduub gebi ahaanba.
Haddii aad u malaynayso inay wakaaladda khalad tahay si kasta oo ay tahay, waxaad u baahan kartaa inaad hubiso qandaraasyadaada. Tusaale ahaan, haddii aan animation u gacan galino hay'ad, waxaan u maleyneynaa inaan kaliya heleyno fiidiyowga wax soo saarka. Hay'adaha badankood ma bixiyaan faylasha ceyriinka ah ee 'After After Effects' haddii aysan taasi qeyb ka ahayn heshiiska. Haddii aad rabto inaad wax ka bedesho animation-ka, waxay u badan tahay inaad dib ugu laabaneyso wakaaladda isha oo aad ka hesho qandaraas kale meesha.
Sida looga Fogaado Xaaladaha afduubka Hay'adda
Suuqgeynta dhijitaalka ah, waxaan kugula talin lahayn inaad had iyo jeer xiriir la yeelatid hay'addaada adoo og waxyaabaha soo socda:
Magaca Domain - yaa iska leh magaca domainka? Waxaad layaabi laheyd inta hay'adood ay uqortaan magaca domainka macmiilka, ka dibna sii. Waxaan had iyo jeer ka dhignaa macaamiisheenna inay isdiiwaangeliyaan oo ay iska leeyihiin domainka.
martigelin - haddii aad xiriirka u jartid hay'addaada, ma u baahan tahay inaad u wareejiso bartaada degel kale ama ma la sii joogi kartaa iyaga? Waxaan badiyaa u iibsanaa martigelinta macaamiisheenna, laakiin had iyo jeer magacooda ayay ku jiraan sidaa darteed haddii ay naga tagaan, kaliya way ka saari karaan marinkeenna.
Hantida ceyriin - naqshadeynta feylasha sida Photoshop, Sawirqaade, Ka dib Saamaynta, Koodhka iyo kheyraadka kale ee loo isticmaalo in lagu soo saaro wax soo saarka warbaahinta kale badiyaa waa hantida hay'adda ilaa aad si kale uga gorgortamto mooyee. Markaan horumarinayno sawir-qaadista, tusaale ahaan, waxaan dib ugu celinnaa faylalka Sawirka si macaamiishayadu ay dib ugu soo celiyaan iyaga oo ay u weyneeyaan qiimahooda. Waad la yaabi doontaa inta badan, laakiin.
Iibso lid ku ah heshiiska kirada
Wax walba waxay ku yimaadaan inaad iibsaneyso oo aad leedahay xuquuqda wax kasta oo ay wakaaladdaadu qabato, ama haddii ay hayaan qaar ka mid ah xuquuqda shaqada ay qabanayaan. Anaga had iyo jeer tan u caddee macaamiisheenna. Waxaan la samaynay dhowr xal macaamiisha meesha aan kharashaadka ku yareynay iyadoo lagala xaajoonayo qandaraas aan ku wada wadaagnay hantida. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan dib ugu adeegsan karno macaamiisha kale haddii aan rabno. Tusaale waa a madal goobta lagu keydiyo waxaan dhisnay sanado kahor adoo adeegsanaya Khariidadaha Google.
Ku hadalka sharciga way adkaan kartaa in wax laga akhriyo heshiis heer xirfadeed markaa hubi inaad ogtahay. Qaab fudud ayaa ah inaad weydiiso:
Maxaa dhacaya haddii aan joojino xiriirkeena ganacsi? Ma anaa leh mise adigaa iska leh?
Haddii aan u baahanahay tafatir ka dib markaan dhameyno xiriirkeena ganacsi, sidee taasi ku dhici doontaa?
Sidoo kale kuma riixayo qodobkaan inaad adigu had iyo jeer kala xaajooto lahaanshaha hay'adda. Badanaa, waxaad ka heli kartaa qiimeyn aad u tartan badan hay'adaha maxaa yeelay waxay horay u sameeyeen aasaaska oo ay iska leeyihiin hantida iyo qalabka lagu fuliyo howlaha. Tani waa badan tahay a ijaarka or isugeyn heshiis ah oo ka shaqeyn kara waxtarkaaga haddii aad rabto inaad lacag dhigato.
Tusaale ahaan, waxaan qiimeyn karnaa goob dhan iyo warbaahinta oo dhan $ 60k laakiin waxaan ka gorgortami doonnaa $ 5k bishiiba. Macaamiilku wuxuu ka faa'iideystaa inuu deg deg deg deg ugu helo asaga oo aan lacagta oo dhan ku bixin xagga hore. Laakiin hay'addu way faa'iideysaa maxaa yeelay sannadka markuu sii socdo, waxay heleen dakhli isdaba joog ah. Haddii macmiilku go'aansado inuu qandaraaska ka jaro mid gaaban oo aan rasmi ahayn, waxay sidoo kale waayi karaan hantida ay la socoto. Ama waxaa laga yaabaa inay ka wada xaajoodaan lacag bixinta hal mar si ay u iibsadaan hantida.
Waxaan la shaqeyneynaa qareennadeena hadda si fiican u qeexitaanka deeqdan macaamiisha. Waxaan ku soo bandhigi karnaa seddex qandaraas oo kala duwan, oo ay ku jiraan la-talin saafi ah oo aan lahayn hanti, fulin halka aan ku ilaalineyno xuquuqda shaqada qiimo hoose, iyo fulinta halka ay macaamiisheenu ku hayaan xuquuqda shaqada heer aad u sareeya.
Sidan, shirkadaha rumeysan inaan qiime aad u saraysa nagala shaqeyn karno qiimo jaban… laakiin haddii aan guuleysanno, oo ay gaar ah Xuquuqda shaqada, waxay u baahan doonaan inay ka gorgortamaan iibsashadaas annaga. Ama way iska tagi karaan, shaqadana waan u haynaa si aan ugu celino macmiil kale.
Tags: hay'addaqandaraaska wakaaladaqandaraasyada wakaaladawada xaajoodka wakaaladaqandaraaskala haystayaal
WittyParrot: Aqoonsiga otomaatiga ah ee Iibinta iyo Isgaarsiinta Suuqgeynta